မောင်ဖုန်းမြင့်: အဝေးကနေ လွမ်းတဲ့ပိတောက်
(ဘုရား သခင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမြေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော. မယ်ဆိုရင် သင်ဖန်ဆင်းထား တဲ. အရာအားလုံး ထဲက ချစ်ခြင်းတရား ၊ အနုပညာနဲ. ပိတောက်ခက် တစ်ခက်
လောက်ပဲ ချန်ထားပေးစေ ချင်ပါတယ် )
သင်္ကြန် ကျ ပီ တဲ.လား
ဒီအချိန်ဆို ပိတောက်ပန်း တွေ ပွင်.နေပြီ ထင်ပါရဲ. အတွေးထဲမှာ တောင် ပိတောက် ရနံ.တွေ သင်းပျံ.လာသလိုပဲ
ဟိုအဝေးက တိမ်တိုက်တွေ ကြား အဝါရောင် ဝိုးတဝါးဟာ ပိတောက်ရဲ. အလင်းနိမိတ် တစ်ပါးပဲ ပေါ. ............
အိပ်မက်တွေ .....အိပ်မက်တွေ....ငါ.အိပ်မက်တွေ ထဲမှာ အဝါရောင်တွေ ထိန်ထိန်ညီးလို. ဗုံ.တီးသံ တွေလဲ ကြားတယ် ။ ချိုမြိန်လွန်းပါတယ် ငယ်ဘဝရဲ. နှောင်ကြိုးမဲ. လွတ်လပ်မှုများ ကြား ကူးခတ် ပျော်ပါးခွင်. ရခဲ.တဲ. အချိန်တွေ....။
ရှင်သန်ခြင်း မှာ အဓ္ဓိပါယ် တစ်ခုခု ရှိခဲ.သလား ....? အရာ အားလုံး ဝရုန်းသုန်းကား နိုင်လွန်းတယ်။ပိတောက်ဆိုတာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာတွေ တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင်. ရခဲ.တဲ. ဆုထူး တစ်ပါးပဲပေါ. ....အဲ.ဒီလို ပိတောက်နဲ. ငါတို.ကြားဘယ် အရာ တွေက စည်းခြားခဲ.တာလဲ....။
ဆာလောင် နေတဲ. အာရုံက ပိတောက်ခက် စိမ်းစိမ်းတွေကြား မြိုမငြိမ်း တေးသွားနဲ. ငွေငန်းရုပ်ကြီးများ ဘွားကနဲ ထွက်လာမလားလို. အရူး အမူးလိုက်ရှာ နေတယ်။နေခြည်ဖြာတဲ. လမ်းလေးထက်က ရှည်မျောမျော
သစ်ကိုင်းရိပ်တွေရဲ. ကြားမှာ ကျွန်တော်ကျ ပျောက် သွားတဲ. ပိတောက်ရိပ် ကလေး ကို တွေ.မိကြရင် ပြန်ပေးစေ ချင်ပါတယ်.....။
တစ်ချို.လူတွေက အချိန်မှန် မပွင်.နိုင်ရှာတဲ့ ပိတောက်ပန်း တွေကို သစ္စာမဲ. သည်ဟု စကားတင်း
ဆိုချင်ကြသေးသည် ။ပိတောက် ခမျာ တစ်နှစ်လုံးလုံး စောင်.စားလာ ခဲ.သမျှ ပေးလာသည်. အခြေ အနေအတွင်း အစွမ်းရှိသမျှ ဖူးပွင်.ပြရသည်ကို ကျေးဖူးစကားမဆို၊ ကျွန်တော် ကတော.ပိတောက်အပေါ်မှာ မည်သို.သော ငြူစူ မှုမျှမလုပ်ရက်ပါ ။
သက္ကရာဇ် ဟုဆိုသော ရထားတွေ တစ်စင်းပီး တစ်စင်း ဖြတ်သန်းသွားခဲ.ကြသည် ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ.ရာတစ်လျှောက် စောင်းငဲ.ကြည်.ရာ အရာအားလုံးက မှုန်ပြပြသာ ....ကြီးမားကျယ်ပြန်.သော ပုံရိပ်ဟူ၍
ပြောပလောက် စရာမရှိခဲ. ၊သို.သော် ဖြတ်သန်းပြီးသား မှတ်တိုင်တိုင်းတွင် ပိတောက်ကတော. တစ်နည်းနည်း
ညတိုင်းလိုလို မက်နေကြ ခြောက်အိပ်မက်တွေ ကြား မှာကျွန်တော် မောလှပြီ ၊ဒီပုံ အတိုင်းဆို ကြာကြာ တောင်.ခံနိုင်မည် မထင်.... ၊ တိုးတိုးလေး ကြားနေရတဲ. အသံကို အသေအချာ နားစိုက်ထောင် ကြည့်မိလိုက်
တော့ လွန်စွာ နှက်သက်ခဲ. ဘူးသော ရွေရောင်အိပ်မက် များသီချင်း ဖြစ်နေလေသည် ။
ပိတောက် နဲ. ကျွန်တော်တို. လို ရှင်ကွဲ ကွဲခဲ.ရသည် ဘဝ တွေများစွာ ရှိခဲ.သည်ကို ကျွန်တော် အသေအချာ
သိသည်. အကြောင်း အရင်းဇစ်မြစ်တွေကို လိုက် မည်ဆိုပါက ၂၁ ရာစု၏ ခေတ်သစ် ပသီပုံပြင်ဖြစ်သွားနိုင်
သည် ၊ ရှေးလူကြီး တွေထားခဲ့သည့် ရေကြည်ရာ ၊မြက်နုရာ ဆိုသည်. စကားပုံလေး ကို ပြက်ပြက်ထင်ထင် သတိရနေမိသည် ၊ ကျွန်တော့် ရဲ့ အခန်းလေးထဲတွင်ချိတ်ဆွဲ ထားသော စာတန်းလေးကတော. ရေသာများ၍
ငါး မတွေ.ဟု ပြောင်းလဲသွားလေသည်......။
တော်ဝင် ပိတောက်ရဲ. မှော်ဝင်ကကြိုး တေးသွား ကို ဆိုညည်းခွင်.လေးများ ရမလား ဆိုတာ.... မွေးရပ် မြေခြား လူငယ်တွေကြား မှာ ရေပန်းအစားဆုံး စကားပဲပေါ. ....... တစ်ချိန်ချိန် မှာ ကျွန်တော်တို.ဟာ အိမ် အပြန် သီချင်းကို လေချွန်စည်းချက် လိုက်ရင်း ပိတောက်ပင်ပျို တွေ အစီအရီစိုက် ထားတဲ. လမ်း လေးထက် အေးချမ်းပျော် ရွင်စွာ ပြန်လာ နိုင်တော.မှာပါ....။
Posted by phone myint at 12:24 AM